ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်-၃ မှာ အတွေးပွားပြီး အပြောများရမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကိစ္စများ - Sports Home Time
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်-၃ မှာ အတွေးပွားပြီး အပြောများရမယ့် စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကိစ္စများ
ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်-၃ မှာတော့ ဒီရာသီ ရှူံးပွဲမရှိသေးတဲ့ ကြီး ၆ ကြီးကြား ထိပ်တိုက်တွေ့မှု၊ ချယ်ဆီးရဲ့ ပထမဆုံးနိုင်ပွဲ၊ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ခြေစွမ်းအမှန်က ဘယ်လိုလဲဆိုတာနဲ့ လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အတွေးပွားပြီး အပြောများရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ အပတ်တိုင်း ပရီးမီးယားလိဂ် သီတင်းပတ်သစ်တွေ မစခင်မှာ ဖော်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
1) အန်ဖီးက ကြိုဆိုမှုမှာ စစ်မှန်တဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ လီဗာပူး၊ အာဆင်နယ်
သြဂုတ်လ ၂၄၊ စနေနေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ မှာတော့ လီဗာပူးနဲ့ အာဆင်နယ်တို့ အန်ဖီးကွင်းမှာ ထိပ်တိုက်တွေ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းလုံးဟာ ဒီရာသီမှာ ရာနှုန်းပြည့်နိုင်ပွဲတွေ ရထားတဲ့ ကလပ်အသင်းတွေဖြစ်တယ်။ အာဆင်နယ်ဟာ ရာသီကြိုမှာ ကစားသမားအင်အားဖြည့်မှုကောင်းတွေ ပြုလုပ်ထားတာက ဒီပွဲကို ပိုစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းနေစေပါတယ်။ လီဗာပူးရဲ့လူစာရင်းက မနှစ်ကလို တောင့်တင်းဆဲဖြစ်ပေမယ့် ခံစစ်ကတော့ အရင်နှစ်ကလောက် မတည်ငြိမ်တော့ပါဘူး။ ပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်ကတော့ မနှစ်က လူစာရင်းတောင့်လာပြီး ခံစစ်က လူးဝစ်၊ ကွင်းလယ်က ဆီးဘယ်လော့၊ တိုက်စစ်က ပီပီတို့ကို ခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့် နှစ်သင်းအင်အားက အရမ်းမကွာတော့ပါဘူး။
အဓိကအားဖြင့် နှစ်သင်းလုံးဟာ အထိုင်မကျသေးတဲ့ ရာသီစမှာတင် ထိပ်တိုက်တွေ့တာကြောင့် ဘယ်အသင်း ခြေပိုသာမယ်ဆိုတာ မှန်းစရခက်ပါတယ်။ အန်ဖီးကွင်းမှာ အာဆင်နယ်ဟာ အသာမရတဲ့အပြင် အောက်အသင်းလို အနေအထားကို ဆင်းနေရတာ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အကျိတ်အနယ်နဲ့ ရလဒ်မပြတ်သားခြင်းမဟုတ်ပဲ ၃-၁၊ ၄-၀၊ ၅-၁ ထိတောင် ဂိုးတွေ ပြတ်ထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်ပေးဖလားကို စိန်ခေါ်မယ့် လီဗာပူးရဲ့ တောင့်တင်းမှုက မနှစ်လိုပဲလား? ဂန်းနားတို့ကကော အရင်နှစ်တွေလို အားပျော့မနေဘူးလား? တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
2) အစကောင်းမှုကို အားယူပြီး မန်စီးတီးကို တုန့်ပြန်မယ့် ဘုန်းမောက်
မန်စီးတီးဟာ ဒုတိယအပတ်မှာတုန်းက စပါးကို သရေကျခဲ့ပြီး တည်ကန်ဘောတွေမှာ အားနည်းချက်ရှိတယ်လို့ ဖော်ထုတ်ခံလာရတယ်။ ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု အသာရခဲ့ပေမယ့် ဂိုးပေါက်ခြိမ်းခြောက်မှုတိုင်းကို စပါးက ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မနှစ်တုန်းကလည်း မန်စီးတီးဟာ ဘုန်းမောက်ကို ဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှု ၈၀% ထိတောင် လွှမ်းမိုးခဲ့တာပါ။ ဟိုဝီရဲ့အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ တာထွက်ကောင်းနေပြီး အိမ်ကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့်ပွဲမှာ မန်စီးတီးကို တောင့်ခံပြမလား ဂွာဒီယိုလာရဲ့ အသင်းကပဲ အရင်နှစ်ရာသီအတိုင်းပဲ ကော်ကောင်းအသင်းတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ပြိုင်ဘက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ပြသမလား မြင်ကြရပါမယ်။
3) ဘော်ဒါဟောင်းတွေ တွေ့ဆုံပွဲ
ရာသီအစောပိုင်းမှာတင် ဘစ်ဆာကာဟာ အသင်းဟောင်းက ဇာဟာနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါပြီ။ ညာအစွန်လူဟာ ပဲလေစ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားကို ထိန်းချုပ်ပြီး သူ့ရဲ့ကျော်ကြားတဲ့ စပိုက်ဒါဖျက်ထုတ်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဇာဟာကလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်တန်းအသင်းတွေကို ပြောင်းနိုင်ဖို့ ဒီရာသီ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးမှ မရသေးတဲ့ ပဲလေစ့်ကို ပြောင်းရွှေ့ခွင့် တင်ထားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ပဲလေစ့်က သွင်းဂိုးတွေရဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီး အိုထရတ်ဖိုဒ့်မှာ ယူနိုက်တက်တို့က ပွဲကို လွှမ်းမိုး ကစားသွားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက်ဟာ ခြေစွမ်း တည်ငြိမ်ခြင်းမရှိပဲ ဥရောပ အပြောင်းအရွှေ့ မပိတ်ခင် မန်နေဂျာဆိုးရှားက အသင်းသားတွေကို ဆက်ထိန်းနိုင်ဖို့လည်း အာရုံစိုက်နေရပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ဟာ အိမ်ကွင်းမှာ ရမှတ်အပြည့် ရယူနိုင်ရင်တော့ ကြီး ၆ ကြီးထဲမှာ ရလဒ်ကောင်းတဲ့ အသင်းတစ်သင်းအဖြစ် သီတင်းပတ်တစ်ခုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
4) ချယ်ဆီးအတွက် အဖြေရှာနေဆဲ လမ်းပတ်
လမ်းပတ်ရဲ့အသင်းဟာ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲ စရမယ်ဆိုရင် ပရီးမီးယားလိဂ်တန်းတက်ကလပ်နဲ့ ဖြစ်သင့်နေပါပြီ။ ယူနိုက်တက်၊ လက်စတာပွဲတွေမှာ ခြေစွမ်းကောင်းခဲ့ပေမယ့် မိနစ် ၉၀ လုံးတော့ ကောင်းနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခြေစွမ်း တသမတ်ထဲ မရှိခြင်းကပဲ ချယ်ဆီးကို ရလဒ်တွေ ကောင်းမွန်ဖို့ တွန်းအားလျော့စေခဲ့တာပါ။ ကစားအားကောင်းပေမယ့် လူငယ်တွေကို အားပြုနေတဲ့ ချယ်ဆီးဟာ ဒုတိယပိုင်းတွေမှာ ခြေစွမ်းကျဆင်းတတ်ပြီး ဗဟိုခံစစ်က အားပျော့သလို တိုက်စစ်ကို ဦးဆောင်သူ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပွဲမှာတော့ ချယ်ဆီးတို့ နိုင်ပွဲရသင့်နေပါပြီ။
5) တပ်ပျက်နေတဲ့ နယူးနဲ့ စိန်ခေါ်သူ စပါး
ရမှတ်တွေလိုနေတဲ့ နယူးကာဆယ်က စပါးကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ စပါးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် စိန်ခေါ်သူအဆင့်ကို ရောက်လာခဲ့တာ နှစ်အနည်းငယ် ကြာလာခဲ့ပါပြီ။ အဘက်ဘက်က တိုးတက်နေတဲ့ စပါးဟာ ဒီပွဲမှာတော့ လူသစ်တွေကို မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ထုတ်သုံးတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် မန်နေဂျာရာဖာနေရာ အစားဝင်လာပြီး ကိုင်တွယ်နေတဲ့ နယူးကာဆယ်မန်နေဂျာကတော့ ဦးတည်ချက်တွေကို ရှာဖွေနေရဆဲပါပဲ။ ဟယ်ရီကိန်း သွင်းဂိုးအများအပြားနဲ့ အိမ်ရှင်အသင်းကို အနိုင်သုံးမှတ်ရစေဖို့ ဦးဆောင်သွားဖို့ ရာနှုန်းများနေပါတယ်။
6) ကြီး ၆ ကြီးကို စိန်ခေါ်သူများ
အက်စတွန်ဗီလာ-အဲဗာတန်၊ ရှက်ဖီး-လက်စတာ ပွဲတွေမှာ အဝေးကွင်းအသင်းတွေက ပရီးမီးယားလိဂ် တန်းတက်ကလပ်တွေကို ရင်ဆိုင်ပြီး ကြီး ၆ ကြီးနေရာတွေကို စိန်ခေါ်နိုင်စွမ်းအား တိုးမြင့်လိုပါလိမ့်မယ်။ တန်းတက်လာပြီးကတည်းက ပိုတောင့်တင်းလာတဲ့ ဝုဗ်ကတော့ ခြေစွမ်းကောင်းတဲ့ ဘန်လေကို အိမ်ကွင်းမှာ ဧည့်ခံရမှာဖြစ်ပြီး ဒီသုံးသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ထိပ်ဆုံး ၆ သင်းနေရာကို ဝင်လုနိုင်လောက်အောင် တောင့်တင်းကြတဲ့ အသင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
[Unicode] ပရီးမီးယားလိဂျ ပှဲစဉျ-၃ မှာတော့ ဒီရာသီ ရှူံးပှဲမရှိသေးတဲ့ ကွီး ၆ ကွီးကွား ထိပျတိုကျတှမှေု့၊ ခယျြဆီးရဲ့ ပထမဆုံးနိုငျပှဲ၊ ယူနိုကျတကျရဲ့ ခွစှေမျးအမှနျက ဘယျလိုလဲဆိုတာနဲ့ လကျရှိ ခနျြပီယံ မနျစီးတီးနဲ့ ပကျသကျပွီး အတှေးပှားပွီး အပွောမြားရမယျ့ ကိစ်စရပျတှကေို ဖျောပွပေးသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီအစီအစဉျကိုတော့ အပတျတိုငျး ပရီးမီးယားလိဂျ သီတငျးပတျသဈတှေ မစခငျမှာ ဖျောပွပေးနတောဖွဈပါတယျ။
1) အနျဖီးက ကွိုဆိုမှုမှာ စဈမှနျတဲ့စိနျချေါမှုတှနေဲ့ လီဗာပူး၊ အာဆငျနယျ
သွဂုတျလ ၂၄၊ စနနေေ့ ည ၁၁း၀၀ နာရီ မှာတော့ လီဗာပူးနဲ့ အာဆငျနယျတို့ အနျဖီးကှငျးမှာ ထိပျတိုကျတှပွေီ့ဖွဈပါတယျ။ နှဈသငျးလုံးဟာ ဒီရာသီမှာ ရာနှုနျးပွညျ့နိုငျပှဲတှေ ရထားတဲ့ ကလပျအသငျးတှဖွေဈတယျ။ အာဆငျနယျဟာ ရာသီကွိုမှာ ကစားသမားအငျအားဖွညျ့မှုကောငျးတှေ ပွုလုပျထားတာက ဒီပှဲကို ပိုစိတျဝငျစားစရာ ကောငျးနစေပေါတယျ။ လီဗာပူးရဲ့လူစာရငျးက မနှဈကလို တောငျ့တငျးဆဲဖွဈပမေယျ့ ခံစဈကတော့ အရငျနှဈကလောကျ မတညျငွိမျတော့ပါဘူး။ ပွိုငျဘကျ အာဆငျနယျကတော့ မနှဈက လူစာရငျးတောငျ့လာပွီး ခံစဈက လူးဝဈ၊ ကှငျးလယျက ဆီးဘယျလော့၊ တိုကျစဈက ပီပီတို့ကို ချေါယူခဲ့တာကွောငျ့ နှဈသငျးအငျအားက အရမျးမကှာတော့ပါဘူး။
အဓိကအားဖွငျ့ နှဈသငျးလုံးဟာ အထိုငျမကသြေးတဲ့ ရာသီစမှာတငျ ထိပျတိုကျတှတေ့ာကွောငျ့ ဘယျအသငျး ခွပေိုသာမယျဆိုတာ မှနျးစရခကျပါတယျ။ အနျဖီးကှငျးမှာ အာဆငျနယျဟာ အသာမရတဲ့အပွငျ အောကျအသငျးလို အနအေထားကို ဆငျးနရေတာ ကွာခဲ့ပါပွီ။ အကြိတျအနယျနဲ့ ရလဒျမပွတျသားခွငျးမဟုတျပဲ ၃-၁၊ ၄-ဝ၊ ၅-၁ ထိတောငျ ဂိုးတှေ ပွတျထားရတာဖွဈပါတယျ။ အမှတျပေးဖလားကို စိနျချေါမယျ့ လီဗာပူးရဲ့ တောငျ့တငျးမှုက မနှဈလိုပဲလား? ဂနျးနားတို့ကကော အရငျနှဈတှလေို အားပြော့မနဘေူးလား? တကယျကို စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။
2) အစကောငျးမှုကို အားယူပွီး မနျစီးတီးကို တုနျ့ပွနျမယျ့ ဘုနျးမောကျ
မနျစီးတီးဟာ ဒုတိယအပတျမှာတုနျးက စပါးကို သရကေခြဲ့ပွီး တညျကနျဘောတှမှော အားနညျးခကျြရှိတယျလို့ ဖျောထုတျခံလာရတယျ။ ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု အသာရခဲ့ပမေယျ့ ဂိုးပေါကျခွိမျးခွောကျမှုတိုငျးကို စပါးက ကွံ့ကွံ့ခံနိုငျခဲ့ပါတယျ။ မနှဈတုနျးကလညျး မနျစီးတီးဟာ ဘုနျးမောကျကို ဘောလုံးပိုငျဆိုငျမှု ၈၀% ထိတောငျ လှမျးမိုးခဲ့တာပါ။ ဟိုဝီရဲ့အသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ တာထှကျကောငျးနပွေီး အိမျကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျရမယျ့ပှဲမှာ မနျစီးတီးကို တောငျ့ခံပွမလား ဂှာဒီယိုလာရဲ့ အသငျးကပဲ အရငျနှဈရာသီအတိုငျးပဲ ကျောကောငျးအသငျးတှဟော သူတို့ရဲ့ ပွိုငျဘကျ မဟုတျဘူးဆိုတာကို ပွသမလား မွငျကွရပါမယျ။
3) ဘျောဒါဟောငျးတှေ တှဆေုံ့ပှဲ
ရာသီအစောပိုငျးမှာတငျ ဘဈဆာကာဟာ အသငျးဟောငျးက ဇာဟာနဲ့ ထိပျတိုကျတှပေ့ါပွီ။ ညာအစှနျလူဟာ ပဲလစျေ့ရဲ့ အကောငျးဆုံး ကစားသမားကို ထိနျးခြုပျပွီး သူ့ရဲ့ကြျောကွားတဲ့ စပိုကျဒါဖကျြထုတျမှုတှကေို လုပျဆောငျရမှာဖွဈတယျ။ ဇာဟာကလညျး ပရီးမီးယားလိဂျထိပျတနျးအသငျးတှကေို ပွောငျးနိုငျဖို့ ဒီရာသီ သှငျးဂိုးတဈဂိုးမှ မရသေးတဲ့ ပဲလစျေ့ကို ပွောငျးရှခှေ့ငျ့ တငျထားခဲ့သေးတာဖွဈပါတယျ။
ပဲလစျေ့က သှငျးဂိုးတှရေဖို့ ခကျခဲနတေဲ့အသငျးဖွဈပွီး အိုထရတျဖိုဒျ့မှာ ယူနိုကျတကျတို့က ပှဲကို လှမျးမိုး ကစားသှားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျဟာ ခွစှေမျး တညျငွိမျခွငျးမရှိပဲ ဥရောပ အပွောငျးအရှေ့ မပိတျခငျ မနျနဂြောဆိုးရှားက အသငျးသားတှကေို ဆကျထိနျးနိုငျဖို့လညျး အာရုံစိုကျနရေပါတယျ။ ယူနိုကျတကျဟာ အိမျကှငျးမှာ ရမှတျအပွညျ့ ရယူနိုငျရငျတော့ ကွီး ၆ ကွီးထဲမှာ ရလဒျကောငျးတဲ့ အသငျးတဈသငျးအဖွဈ သီတငျးပတျတဈခုကို ကြျောဖွတျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
4) ခယျြဆီးအတှကျ အဖွရှောနဆေဲ လမျးပတျ
လမျးပတျရဲ့အသငျးဟာ နိုငျပှဲတဈပှဲ စရမယျဆိုရငျ ပရီးမီးယားလိဂျတနျးတကျကလပျနဲ့ ဖွဈသငျ့နပေါပွီ။ ယူနိုကျတကျ၊ လကျစတာပှဲတှမှော ခွစှေမျးကောငျးခဲ့ပမေယျ့ မိနဈ ၉၀ လုံးတော့ ကောငျးနတော မဟုတျပါဘူး။ ခွစှေမျး တသမတျထဲ မရှိခွငျးကပဲ ခယျြဆီးကို ရလဒျတှေ ကောငျးမှနျဖို့ တှနျးအားလြော့စခေဲ့တာပါ။ ကစားအားကောငျးပမေယျ့ လူငယျတှကေို အားပွုနတေဲ့ ခယျြဆီးဟာ ဒုတိယပိုငျးတှမှော ခွစှေမျးကဆြငျးတတျပွီး ဗဟိုခံစဈက အားပြော့သလို တိုကျစဈကို ဦးဆောငျသူ လိုအပျနပေါတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ဒီပှဲမှာတော့ ခယျြဆီးတို့ နိုငျပှဲရသငျ့နပေါပွီ။
5) တပျပကျြနတေဲ့ နယူးနဲ့ စိနျချေါသူ စပါး
ရမှတျတှလေိုနတေဲ့ နယူးကာဆယျက စပါးကှငျးမှာ ယှဉျပွိုငျရမှာပါ။ စပါးဟာ ပရီးမီးယားလိဂျ စိနျချေါသူအဆငျ့ကို ရောကျလာခဲ့တာ နှဈအနညျးငယျ ကွာလာခဲ့ပါပွီ။ အဘကျဘကျက တိုးတကျနတေဲ့ စပါးဟာ ဒီပှဲမှာတော့ လူသဈတှကေို မွိုငျမွိုငျဆိုငျဆိုငျ ထုတျသုံးတော့မှာပါ။ ဒါပမေယျ့ မနျနဂြောရာဖာနရော အစားဝငျလာပွီး ကိုငျတှယျနတေဲ့ နယူးကာဆယျမနျနဂြောကတော့ ဦးတညျခကျြတှကေို ရှာဖှနေရေဆဲပါပဲ။ ဟယျရီကိနျး သှငျးဂိုးအမြားအပွားနဲ့ အိမျရှငျအသငျးကို အနိုငျသုံးမှတျရစဖေို့ ဦးဆောငျသှားဖို့ ရာနှုနျးမြားနပေါတယျ။
6) ကွီး ၆ ကွီးကို စိနျချေါသူမြား
အကျစတှနျဗီလာ-အဲဗာတနျ၊ ရှကျဖီး-လကျစတာ ပှဲတှမှော အဝေးကှငျးအသငျးတှကေ ပရီးမီးယားလိဂျ တနျးတကျကလပျတှကေို ရငျဆိုငျပွီး ကွီး ၆ ကွီးနရောတှကေို စိနျချေါနိုငျစှမျးအား တိုးမွငျ့လိုပါလိမျ့မယျ။ တနျးတကျလာပွီးကတညျးက ပိုတောငျ့တငျးလာတဲ့ ဝုဗျကတော့ ခွစှေမျးကောငျးတဲ့ ဘနျလကေို အိမျကှငျးမှာ ဧညျ့ခံရမှာဖွဈပွီး ဒီသုံးသငျးဟာ ဒီရာသီမှာ ထိပျဆုံး ၆ သငျးနရောကို ဝငျလုနိုငျလောကျအောငျ တောငျ့တငျးကွတဲ့ အသငျးတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
ယူနိုက်တက် ပွဲစဉ်တိုင်း အတွက် ရည်မှန်းချက်ကြီး ရှိနေတဲ့ ၀မ်ဘစ်ဆာကာ
နေမာအတွက် ပေါင် သန်း ၁၀၀ နဲ့ ကစားသမားအလိုက်ပေးလာတဲ့ ရီးရဲလ်၊ ဆန်းချက်၊ လိုဇာနို၊ ဒိုင်ဘားလား၊ ဘေးလ်တို့ နဲ့ ညနေခင်း နောက်ဆုံးရသတင်းများ